XOG: Sheikh Shariif oo ka dhuuntay masraxa siyaasadda dalka & Qorshihiisa 2020/21 | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Sheikh Shariif oo ka dhuuntay masraxa siyaasadda dalka & Qorshihiisa 2020/21
XOG: Sheikh Shariif oo ka dhuuntay masraxa siyaasadda dalka & Qorshihiisa 2020/21
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in isbedel siyaasadeed xooggan uu ku dhacay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed,waxaana sidoo kale muuqaneysa dib u gurasho uu sameynayo siyaasigan sameynta ku leh Soomaaliya xilli ay soo dhowdahay doorashada dalka.
Shariif Sheikh Axmed ayaa in mudo ah ku sugan isku taga Imaaraadka Carabta oo ah dalka si weyn u mucaaradsan Dowladda Farmaajo dagaal dhinacyo badan ahna la gashay.
Xubno ka tirsan madasha Xisbiyada Qaran iyo siyaasiyiin maxali ah ayaa ku waramay in Sheikh Shariif hoos u dhigay habkii uu u arkayay Dowladda Farmaajo,wuxuuna ka gaabsaday inuu ka hadlo arrimaha madasha iyo siyaasadda dalka ee taagan xilligan.
Sidoo kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed oo lagu xusuusto hadaladii kululaa ee uu kula hadlayay Dowladda ayaa sameynin wax aragti siyaasadeed ah ah tan iyo 17-kii bishii Agoosto, wixii intaa ka dambeeyay labo tacsi unbuu ku daabacay barahiisa Bulshada.
Dalka oo hadda marxalad siyaasadeed oo adag ku jira ayaa Shariifka ka dhiiban wax aragti siyaasadeed ah, isagoo gabi ahaanba isaga aamusay, sidoo kalena waxaa joogsaday howlihii madasha Xisbiyada Qaran.
Lama oga waxyaabaha iska bedelay Sheikh Shariif kuna qasbay inuu ka aamuso siyaasadda dalka oo haatan mareysa meel xasaasi ah oo u baahan in la daba qabto.
Waxaa muuqaneysa iney sii kala fogaanayaan madaxdii hore ee dalka oo ku mideysnaa cambaareynta Xukuumadda haatan jirta, mana muuqato abaabul siyaasi oo ka jira dalka.